သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အေးခဲထားသောအစားအစာ -> ငါးအ Rolls
Champion Refrigerant Food Co., Ltd. ပူးပေါင်းရှာဖွေနေသည်။ အကြှနျုပျတို့သညျအစာအာဟာရကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများကအတည်ပြုထုတ်ကုန်အားလုံးကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းဈေးနှုန်းများနှင့်အတူအရသာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ပေါ်မကယ်မလွှတ်အမိန့်နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုင်ဝမ် hotpot ပါဝင်ပစ္စည်းများများအတွက်ဦးဆောင် Brad ဖြစ်ကြ၏။ ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် ငါးအ Rolls, Sakura ပုစွန်သမင်ဒရယ်ဘောလုံး, ဒိန်ခဲကိုငါး tofu နှင့်အေးစက်နေတဲ့ tofu လူကြိုက်များသောဖြစ်ကြ၏။ စိတ်ဝင်စားသူရှိလျှင်, ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ # # ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးစားနပ်ရိက္ခာဆန်တင်ပို့သူများက high-quality ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးကိုအစားအစာ၏ # ထောက်ပံ့ရေးပူပြင်းတဲ့အိုးကစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများမှာ
hotpot အတွက်လူကြိုက်များပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြ၏။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုအမှန်တကယ် Sakura ပုစွန်သမင်ဒရယ်ဘောလုံးအတွက်သမင်ဒရယ်ကိုမြည်းစမ်းခွင့်ပြုထားသောကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ဖြစ်ကြ၏။ အများစုက restauranteurs hotpot, ပဲပုပ်စွပ်ပြုတ်, hotpot ခေါက်ဆွဲ, သို့မဟုတ် oden အတွက် Sakura ပုစွန်သမင်ဒရယ်ဘောလုံးထားရန်ရှိုဖြစ်ကြ၏။ Sakura ပုစွန်သမင်ဒရယ်ဘောလုံးထိုကဲ့သို့သောကျိုးနပ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြ၏။ # ကျနော်တို့ပူပြင်းတဲ့အိုးတလုံးကိုအစားအစာထဲမှာအထူးပြုထိုင်ဝမ် # ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူအတွက်အေးစက်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနေကြတယ်